Fidobodoboky ny fo: mahatratra 150,000 ireo mpanjifa Arivo Taona mahery mihoatra ny XNUMX | Martech Zone
Fidobodoboky ny fo: mahatratra 150,000 ireo mpanjifa vehivavy an-taonan'ny mahery
Zoma, Martsa 2, 2018 Alahady, Martsa 4, 2018 Douglas Karr
Ny marika androany dia mandany $ 36 miliara amin'ny fantsom-piarahamonina hitrandrahana sy hahazoana mpanjifa an'arivony taona vaovao mampiasa fampielezan-kevitra amin'ny fomba Influencer miaraka amin'ny anarana malaza. Na izany aza; Ny fifamofoana sy ny fiovam-po dia ambany satria ny vehivavy arivo taona dia matoky ary mifandray bebe kokoa amin'ny tolo-kevitry ny namana fotsiny rehefa mifidy ny vokatra na serivisy iray.
Fitepon'ny Fo dia sehatra iray ho an'ny vehivavy arivo taona hampiroboroboana marika ao anatin'ny kaonty sy fiaraha-monina misy azy ireo. Heartbeat dia namoaka ny azy Discover Feed, manolotra fomba tsy misy fangarony hifandraisan'ny marika amin'ireo mpanjifa vehivavy efa 150,000 XNUMX taona eo amin'ny lampihany. Amin'ny alàlan'ny safidy an'arivony an'arivony tao anatin'ny herinandro voalohany, ny Discover Feed vaovao an'ny Heartbeat dia nanjary fomba haingana indrindra hahitan'ny mpanjifa fampielezan-kevitra marika ahafahan'izy ireo mangataka ho Ambasadaoro be karama ary manomboka mamorona atiny fampiroboroboana amin'ny alàlan'ny fantsom-piarahamonin'izy ireo.
Anisan'izany ny fampiasa amin'ny fitempon'ny fo:
Fanentanana mihodina - Mahatratra haingana ny tanjonao amin'ny Templates ary misafidiana modely fanentanana mifantoka amin'ny tanjona kendrena amin'ny marketing. Ny ekipanay dia hanao izay hahazoana antoka fa efa napetraka ny zava-drehetra hahatratra ny tanjonao. Mipetraka fotsiny ianao ary mankafy an'io La Croix io.
Fikarohana namboarina - Ny môdely rehetra dia misy ny fahaizana mametraka fanontaniana amin'ireo Ambasadaoronao. Aza manontany tena mihitsy raha handeha tsara amin'ny mpanjifanao indray io fomba fandoko io!
Fanatsarana ny fotoana tena izy - Ny rafitra Heartbeat's HAAL (Heartbeat Ambassador Authenticity Logic) dia manara-maso ary manao laharam-pahamehana ireo mpampiasa izay mamorona atiny mahomby indrindra ho an'ny marikao. Manao veloma ny fandoavana vola ho an'ny mpanaraka sandoka mba handrenesany ny hafatrao.
Fitepon'ny Fo mahatonga ny fampielezan-kevitra ara-tsosialy handany fahombiazana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny famelana ireo marika hiditra mivantana amin'ireo mpanjifa amin'ny alàlan'ny namana atokisana. Ambasadaoro eo amin'ny sehatra Heartbeat dia omena vola mba hamoronana sy hizarana votoaty tena izy momba ireo marika tian'izy ireo. Ny masoivohon'i Heartbeat dia mahatratra mpanjifa 526 tapitrisa amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitr'izy ireo ao amin'ny Instagram, Facebook ary SnapChat, izay afaka miteraka fitiavana mihoatra ny 100 tapitrisa sy fanehoan-kevitra 9 tapitrisa mahery isan-kerinandro.
Heartbeat no hany tambajotram-mpanjifa amin'ny habeny ahafahan'ny mpanao dokambarotra mamorona fanentanana hahatratra ireo tanora vehivavy mpanjifa sy ny faribolana akaiky ny sakaizany mahatoky amin'ny alàlan'ny atiny ateraky ny mpampiasa.
Manomboha amin'ny fitempon'ny fo
Tags: masoivohomarika ambasaderaambasadaoro marika vehivavyfampielezan-kevitra vehivavyvehivavy mahatratrahaalfitepon'ny fomillennialsvehivavy
Sehatra: Fanesoana amin'ny efijery an'ny Apple Watch, iPad, na Mac